Wararkii ugu dambeeyay ee kusaabsan baabi'inta Imtixaanka ISEE ee Imtixaanada Dugsiyada BPS | Boston School Finder (Baaraha Dugsiyada Boston)
Wararkii ugu dambeeyay ee kusaabsan baabi'inta Imtixaanka ISEE ee Imtixaanada Dugsiyada BPS
Feebaraayo 5, 2020, The Boston Globe waxa uu daabacday maqaal tilmaamaya sida Education Records ureau (ERB, Xaafiiska Diiwaanada Waxbarashada) uu ula lahaa xariir Dugsiyada Dadweynaha Boston ee arimahga la xariira maamulka imtixaanka ISEE ee galo magaalada seddex dugsiyo imtixaan . Waqtiga cadeynta ERB waa wax lala yaabo oo keenaya su'aalo badan marka loo eego inta jeer ee ay jawaab ka bixinayso: Sidee sax u ahayd go'aanka ka guurida ISEE yaase sameeyay?
Ayadoon loo eegin sida go'aanka loo gaaray — ama xataa imtixaanka loo adeegsan doono mustaqbalkae—waxaan si xoogan u aaminsanahay in marka iskuul u baahan yahay inuu galo imtixaan, had iyo jeer waxaa jiri doona sinnaan la'aan. Ugu dambeyntiina, ka qaadista caqabadaha jira ee marin u helkas—iyo dib u milicsiga geedi socodka guud ee galitaanka imtixaanaadka dugsiyadas—waxay guul weyn u tahay qoysaska la fogeeyay ee Boston ee doonaya uun fursad wanaagsan oo waxbarasho tayo sare u leh carruurtooda.
Su'aal kama taagna in gelitaanka imtixaanada dugsiga Boston ay ahaayeen taariikh ahaan kuwo aan loo sinnayn halka muranka ka dhashay ogolaanshaha iskuulada imtixaanka ayaa ah arin laga dhaxlay taas oo saadaalinaysa hogaaminta cusub ee Dr. Cassellius. Taasi waa sababta aan ugu dhiirigelinay sida u furan Dr. Cassellius arimaha ku saabsan ujeedada degmada ee raadinta baddelaad ISEE ah.
BPS waxay hadda haysataa fursad wayn keligeed si ay u muujiyaan go'aan dhab ah Dr. Cassellius Qorshaha Istiraatiijiga ah ee : horumarinta caadiga ah galo dugsi imtixaan in kordhisa helidda tayo sare leh si ay u kasta ardayga ee degmada eegin—jinsiyadda ama mudnaan. Ka fogaanshaha ISEE waxay la mid tahay dhowr arrimood oo waaweyn oo Qorshaha Istaraatiijiyadeed, gaar ahaan, yoolalka ku saabsan ciribtirka farqiga u gaarka ah, barashada dardargelinta, iyo fursadaha la ballaariyey. Hadafka degmada ee ah "inuu xoojiyo codadka oo dhan" wuxuu sidoo kale siinayaa fursad qaas ah oo ay kujiraan qoysaska iyo la-hawlgalayaasha nidaamka degmada si loo helo heerka ugu habboon ee looga galo imtixaanka dugsiga.
Himiladeenna urur ahaan wuxuu udub dhexaad u yahay isku xirka qoysaska macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u gaaraan go'aamada ugu aqoonsan ee ay ka heli karaan iskuullada aadka u fiican ee qoysaskooda — iyo, tan ugu muhiimsan sida loo galaayo iskuulladaas.
Si kasta oo ay ahaato heerka aasaasiga ah ee gelitaanka imtixaanka dugsiga, shaqadeena weli waa isku mid: Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno iskaashiga aan la leenahay BPS si aan u helno ereyga qoysaska ku saabsan waxa heerarkaan cusub ee imtixaanku noqon doonaan, iyo sida iyo goorta ay isdiiwaangelin karaan ama isku diyaarin karaan. Marka la eego aragtidayada safka hore ee gaarka ah, waxaan ku casuumaynaa BPS inay awood u yeeshaan fahamkeenna qotada dheer ee halka qoysasku ay inta badan ugu halgamaan hannaanka gelitaanka dugsiga imtixaanka si looga caawiyo iyaga inay doortaan nidaamka ugu wanaagsan dhanka sinaanta dhamaantood.
Hore usocodka, waxaan rajeyneynaa degmadu inay awooda saarayso sida ay uga go’antahay inay si hufan u muuqato maaddaama ay sahaminayaan xulashooyinkooda si xal loogu helo qoysaska, kuna riixaya cirbadda tayada dhammaan degmada—mana ahan oo keliya iskuulada imtixaanka.